Ukudala ishishini lokhenketho elungeleleneyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » Ukudala ishishini lokhenketho elungeleleneyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Julayi 7, 2018
Eyona nto iphambili kuyo, ukhenketho lishishini kwaye ukuze ibe yishishini eliyimpumelelo kufuneka kubekho ulungelelwaniso phakathi kweemfuno zababoneleli (zabarhwebi) kunye nezo zomamkeli (umthengi). Ukuba imveliso ibiza kakhulu ke abantu baya kufumana ezinye iindlela, kwaye ukuba ayibizi mali ininzi kunokuba ilahlekelwe ludumo okanye akukho nzuzo inokwenziwa.
-Fumana iindlela zokuchitha kancinci kodwa unike elona xabiso. Umzekelo, oorhulumente abaninzi babona ukhenketho njengeshishini ekulula ukuluhlawula. Iirhafu eziphezulu ekugqibeleni zigxotha abakhenkethi. Iindwendwe azazi, kwaye zinokuhlawula irhafu ephezulu okokuqala, kodwa zisenokungabuyi okwesibini. Ukuba akukho ndlela yokuba irhafu igcinwe emgceni, yenza isibhengezo esithi "sibuyisela iirhafu zakho" ngokunciphisa iindleko ezisisiseko okanye ngokubonelela ngezaphulelo ezizodwa zokufunxa irhafu. Isitshixo kukwenza ukuba umthengi azive ukuba unikwa ixabiso elifanelekileyo kwiindleko. Nazi ezinye iindlela ezininzi zokubonisa ukuba imveliso yakho yezokhenketho lixabiso elifanelekileyo ngelixa usenza inzuzo.
Lungelelanisa ukungena kwehotele kwaye ujonge iishedyuli okanye wenze iishedyuli zehotele eziguqukayo. Okwangoku uninzi lweehotele zinomgaqo-nkqubo-olungele yonke imigaqo-nkqubo. Uninzi lweehotele zinalo ixesha lokungena emva kwemini kunye nexesha lokuphuma emini okanye ngaphambili. Ayithethi nje ukuba ukuhlala kosuku kungaphantsi kweeyure ezingama-24, kodwa amaxesha ngamaxesha awanangxaki kwiindwendwe. Ukubonelela ngeenkonzo zokungena kunye nezokungena kunye nentlawulo ukulungiselela ukuba undwendwe lukhethe amaxesha ahambelana neshedyuli yakhe.
-Bonisa zombini iindwendwe kunye namalungu oluntu ukuba ungumdlali oyinyani woluntu. Ngokuba nesisa kunye nokuzincama kumashishini okhenketho angqina ukuba ayingobantu batyebileyo kuphela, kodwa bayinxalenye yoluntu. Ukuba yinxalenye yoluntu kudala izibonelelo ezininzi ongenakuze uziqaphele ngaphambili. Indawo enye apho ishishini lokhenketho liye laba liqabane elicacileyo kukhuseleko lokusingqongileyo. Ezokhenketho azinakubakho kwindawo ezele inkunkuma, enikezela ngamanzi angcolileyo nomoya ongcolileyo. Oku kuthetha ukuba uhambo nokhenketho akufuneki lunoxanduva kumashishini alo kuphela kodwa kwanakwindawo esebenza kuyo. Iindwendwe zenza okungaphezulu kunokuphefumla nje umoya obonelelwa yihotele!
- Yiba ngumqeshi olungileyo. Kwiindawo ezininzi zehlabathi ishishini lokhenketho laziwa ngemivuzo ephantsi kunye neeyure ezinde. Olu “xhatshazo lwabasebenzi” ludla ngokwakha ingqumbo kwaye lonakalise umgangatho weenkonzo esizinikezelayo. Inkonzo yabathengi ehlwempuzekileyo kunokuba ibuhlungu ukubuyela kutyelelo kunye nedumela lendawo. Ngenxa yokuba ukhenketho lungamazwe aphesheya, abasebenzi balo abanakuba ngabasebenzi abangenazakhono kwaphela. Kufuneka bathethe iilwimi ezahlukeneyo kwaye bayayazi indlela yokuhamba kwindawo yentengiso yeenkcubeko. Okungcono ukubaphatha abasebenzi kukukhona ulungelelwaniso lushishino lokhenketho lwasekhaya okanye imveliso.
-Ungavumeli itekhnoloji ukuba ihambise imveliso yakho yezokhenketho. Zininzi izibonelelo kwitekhnoloji kwaye ngeendlela ezininzi itekhnoloji inokuba ngumgcini iindleko kwaye kwangaxeshanye inokuvelisa ukwanda kokusebenza. Ingxaki kukuba ukhenketho konke malunga nokudala imemori kunye nokwakha ubudlelwane phakathi kwabantu. Kubalulekile ukufumana ibhalansi elungileyo phakathi kokusebenza kunye nokobuqu. Oomatshini abancume kwaye kokukhona ulungelelwaniso ngakumbi lwamava okhenketho luye lwahluka kancinci kwaye alulibaleki. Itekhnoloji ikanefuthe kwindlela esihlawulisa ngayo. Abakhenkethi banamhlanje kunqabile ukuba basebenzise ifowuni yasendlini, mhlawumbi phantse i-100% labahambi baneselfowuni, bafuna i-intanethi yasimahla, kwaye bayacaphukela izongezo ezinje "ngomrhumo weholide". Izongezo kunye neentlawulo ezongeziweyo ezibekwe ziinqwelomoya ezininzi zibangele abahambi abahamba rhoqo nabanolwazi ukufumana iindlela ezizezinye kwaye kukhokelele kwingeniso yenqwelomoya kodwa ukwaneliseka kwabathengi kuncinci.
Umzi mveliso wokuhamba ngeenqanawa wenze umsebenzi olungileyo wokulinganisa iindleko, ulonwabo kunye nokudala imemori. Kufanele ezinye iindawo zeshishini lokhenketho ukuba zifunde apho ukuhamba ngenqanawa kube yimpumelelo. Ukuhamba ngeenqanawa zomlambo kudale iindleko ezinamava awodwa ngaphandle kwemiceli mngeni yomzimba eza nohambo lolwandle. Esi inokuba sesona sizathu sokuba kwamanye amazwe amava okuhamba ngesikhephe sele edumile njengeepaki zokuzonwabisa okanye amanye amava omhlaba abiza kakhulu ngosuku.
- Akukho nto ilungelelanisiweyo ukuba ayikhuselekanga. Ulwaphulo-mthetho nobunqolobi bunokulutshabalalisa ushishino lwezokhenketho olunempumelelo enkulu. Nokuba ilungile kangakanani inkonzo yakho yabathengi kwaye uthengisa kangakanani, ukuba indawo yakho ayibonwa njengekhuselekileyo, ekugqibeleni uya kuphulukana nabathengi kunye namathuba otyalo-mali. Ukubeka nje amapolisa esitratweni angaqeqeshwanga kwii-TOPPs okanye ukhuseleko kwezokhenketho kunokuba nemveliso. Ehlabathini lonke akufuneki ukuba sikhathazeke kuphela ngemicimbi yeziyobisi kunye nobunqolobi, kodwa sikwaneendlela zobundlobongela obucwangcisiweyo ezifana nemfazwe yamaqela emigulukudu. Kuhlala kulunge ukukhumbula ukuba xa kuziwa kulwaphulo-mthetho kunye nobunqolobi, eyona ndlela ilungileyo yolawulo lweengxaki kukuthintela ingxaki. Asinakuhlala siyilawula le nto, kodwa okukhona ulungelelwano phakathi kolwaphulo-mthetho nobunqolobi luya kuba nempumelelo ngakumbi kushishino lokhenketho.
-Ukulungelelanisa ukukhuthazwa kwengingqi kunye nokunyusa kwendawo. Uninzi loluntu alunazo izinto ezinomtsalane ezaneleyo zokugcwalisa ukuhlala kweentsuku ezintathu. Ngesi sizathu, indlela yengingqi ivumela inani loluntu ukuba lenze isicwangciso sentengiso esidibeneyo. Nangona kunjalo, nangona ukuthengisa ngokudibeneyo kubalulekile ukuba kungabikho mdla kuluntu ofuna ukuphulukana nesazisi sawo kwaye ukuba wonke ummandla uyafana, ekugqibeleni woyise injongo yommandla. Yenza ibhalansi, ube yinxalenye yommandla kodwa ungalahli indawo ekuhlaleni okanye yomtsalane.